‘प्रतिभा जोगाउने चुनौती छ’
अन्तर्वार्ता/विचारआइतवार, पौष ९, २०७४
२ पुसमा थाइल्याण्डमा भएको एशियन क्रिकेट काउन्सिलको एसीसी अण्डर–१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि विजेता नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जंगबहादुर थापा भन्छन्, “जितले भविष्यका लागि आशा जगाएको छ ।”
नेपाली टोलीको जित कसरी सम्भव भयो ?
यू–१६ राष्ट्रिय टोलीका लागि छनोट प्रतियोगिता नै हुन सकेन । प्रत्येक क्षेत्रबाट चार/पाँच जना छान्यौं र प्रशिक्षित गर्‍यौं । टोलीमा राम्रा खेलाडी परे, त्यो देखाए पनि । खेलाडीहरूले भविष्यका लागि आशा जगाएका छन् । व्यक्तिगत रुपमा पनि खुशी छु ।
म्यानमारसँगको खेलमा टोलीले कीर्तिमानी प्रदर्शन नै गर्‍यो । यसले कस्तो संकेत गर्छ ?
म्यानमारसँग ३५ ओभरमा ६ विकेट गुमाएर ३५० रन बनायौं । यति त ५० ओभरमा पनि हाम्रो कुनै टोलीले बनाएको छैन । र, १३ रनमै म्यानमारलाई आउट पनि गर्‍यौं । धेरै फराकिलो जित हो । यसले के देखाउँछ भने हामी रन बनाउन पनि सक्षम छौं । यो भोलिका लागि राम्रो संकेत हो ।
उमेर समूहका खेलमा प्रायः जित्ने तर सिनियर टोली कमजोर हुँदै जाने कारण के हो ?
यू–१६ मा हारेकै छैन । यू–१९ पनि जितेकै छौं । उमेर समूहमा सधैं राम्रो हुन्छ । त्यसपछि न खेल हुन्छन्, न खेलाडीले निखारिने मौका पाउँछन् । एकेडेमी पनि छोडिसकेका हुन्छन् । नियमित खेल्ने ठाउँ हुँदैन । राम्रा देशका बलिया टोलीसँग एक÷दुई महीना अभ्यास खेले पो क्षमता थाहा हुने हो । प्रतियोगिता आउने बेला मात्रै तयारी गर्छौं, त्यसले पुग्दैन ।
भने पछि अहिले राष्ट्रिय टोलीको प्रदर्शन खस्कनुमा तयारीकै दोष हो त ?
हो । घरेलु प्रतियोगिताहरूबाट नै खेलाडी उत्पादन हुन्छन् । पुरानाले सुधार्ने मौका पाउँछन् । तर, केही समययता घरेलु लिग हुनसकेका छैनन् । ५० ओभरका धेरै खेल हुनुपर्ने हो । त्यो नहुँदा स्वाभाविक रुपमा प्रदर्शन कमजोर हुन्छ । अहिले भएको त्यही हो ।
क्षमतावान युवा टोलीलाई जोगाइराख्न के गर्नुपर्ला ?
प्रतिभावान युवा खेलाडी आएका छन् । अहिले त एकेडेमीहरूसँग जोडिएका छन्, त्यसपछि यताउता जान्छन् । उनीहरूलाई नेपाल क्रिकेट संघले छाड्नु भएन । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा नियमित टी–२०, एक दिवसीय र दुई दिवसीय प्रतियोगिता हुनुपर्छ । प्रदेशमा एउटा भए पनि राम्रो खेलमैदान बनाउनुपर्छ । अहिलेको यो टोलीलाई जोगाउन सकियो भने अबको ५/६ वर्षपछि केही पुराना र नयाँ गरेर बलियो सिनियर टोली बन्छ ।